राष्ट्रिय छात्रा भलिवलको उपाधि न्यु डाईमण्ड काठमाण्डौले जित्यो – Epublicnews.com
Sambhabi खेलकुद , प्रमुख समाचार , November 3rd, 2018
बुटवल, १७ कार्तिक । बुटवलमा जारी एभरेष्ट कप राष्ट्रिय जुनियर छात्रा भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि काठमाण्डौको न्यु डायमण्ड एकेडेमीले जितेको छ । शनिबार भएको फाईनलमा आयोजक एभरेष्ट मावि बुटवललाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै न्यु डायमण्डले उपाधि हात पारेको हो । उपाधिसंगै न्यु डायमण्डले नगद ५० हजार, कप, मेडल, प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भएको छ । एभरेष्ट उपविजेतामा चित्त बुझाउदै नगद २५ हजार कप, प्रमाणपत्र, मेडलबाट पुरस्कृत भएको छ । तेस्रो स्थानको खेलमा टप्स मावि पोखराले जानकी मावि चितवनलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ । टप्सले १२ हजार, प्रमाणपत्र, मेडलबाट पुरस्कृत भएको छ । भने सान्त्वना स्थान हासिल गरेको जानकी ५ हजार, प्रमाणपत्र, मेडलबाट पुरस्कृत भएको छ ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लिभेरो एभरेष्टका यमकली कवँर मगर, उत्कृष्ट स्टाईकर एभेरेष्टकै पुनम चन्द, उत्कृष्ट ब्लकर जानकी मावि चितवनकी मोनिका महतो, उत्कृष्ट सर्भर टप्स मावि पोखराकी ममता दमौरा, उत्कृष्ट सेटर न्यु डायमण्डकी अनुशा सुनुवार र बेष्ट प्लेयर न्यु डायमण्डकै झरना श्रेष्ठ र उत्कृष्ट प्रशिक्षक न्यु डायमण्डका कुमार राई हुदै नगद ५ हजार र कपसहित प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भएका छन ।
विजयी खेलाडिलाई पुरस्कार वितरण गर्दै प्रदेश नं. ५, नेपालका समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको अपेक्षा ब्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेल, अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लेकनाथ ज्ञवाली, प्याब्सन प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खनाल, रुपन्देहीका पूर्व जि.सि.अ. टेकबहादुर थापा, नेपाल भलिबल संघका उपाध्यक्ष निरोज मास्के, विद्यालयका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने लगायतले खेल क्षेत्रको विकासमा सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यालयका शिक्षक माधव पौडेलले गर्नुभएको थियो । प्रतियोगितामा काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, दाङ, धनगढी, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर, चितवन, काभ्रे र रुपन्देहीका गरी १६ समूहले सहभागिता जनाएका थिए ।